Topnepalnews.com | अम्बर गुरुङ गम्भिर । 'उकालि चढ्दा पसिना पुछ्ने तिमि नभए अरुको होला ?...'
Posted on: May 02, 2016 | views: 831
गोकर्ण अधिकारी-१७ फागुन, काठमाडौं ।
'उकालि चढ्दा पसिना पुछ्ने तिमि नभए अरुको होला, मर्मलाई बुझ्ने तिमि एक मेरो तिमि नभए अरुको होला ??? ...' यो गित सुन्दैगर्दा झसंग सम्झिएं मन पर्ने आफ्ना श्रष्टाको लागि अहिले पनि नबोले मैले बोल्ने कहिले ?
म एक आम नागरिक । मेरो पसिना र श्रमले आर्जेको रकमबाट मैले राज्यलाई तिरेको तिरोबाट कटाएर सुशील कोइरालाले उतिबेला डेढ करोड खर्चेर यि केपी ओलीलाई बचाएका थिए । सँगै आफुले पनि त्यो भन्दा धेरै खर्चेर एक बर्ष पनि नबाँची कोइराला परमधाम भएका छन् ।
टर्रो र झर्रो भाषामा भन्ने हो भने विते पनि केही ननाप्ने यि दुई पात्रको लागि यतिधेरै खर्चंदा सकल नेपाली जन कत्ति खुशी थिएन र छैन । तर एक श्रष्टा जसले युगौं युगको लागि नेपाली संगित र कला क्षेत्रको लागि आफु भूलेर योगदान गर्यो उसको जिवन संकटमा पर्दा अरुको तिरोबाट बचेको त्यो व्यक्ति तिरो तिर्नेले नै खर्च दिएर बचा भन्दा कानमा कानेगुजी जमाएर बसेको छ ।
मेरो तिरो माथि र्याल काढ्ने भष्ट खुमबहादुर जस्तालाई २० औं लाख दिने यो नकचरो सरकार नेपाली आधुनिक सङ्गीतका महान् हस्ती अम्बर गुरुङ उपचार खर्च अभाव झेल्दै समस्यामा पर्दा गुमनाम बनिरहेको छ ।
लाग्छ लासमाथि एकथुंगो फुल चढाएर महान हुनुहुन्थ्यो भनौंला भन्ने मृत्युको घडी कुरेर बसिरहे झैं लाग्ने सरकारका मुखिया मैले जिएको जिवन बपौतिमा पाएको हो भन्ने ख्याल गुमाउँदै छ ।
भारतको मेदान्त अस्पताल हरियाणामा असाध्यै गम्भीर रुपमा एक महिनादेखि पार्किन्सन रोगको उपचार गराइरहनु भएका गुरुङलाई आर्थिक अभाव भएको छ ।
उपचार महँगो भएको कारणले आर्थिक अभावका कारण उहाँको उपचारमा समस्या परिरहेको महिना दिनअघि देखीनै खवर बाहिर आइरहेको छ । तर पाउ मोल्नकै लागि भारत पुगेर आएका ओलीले न उनलाई सम्झे न सम्झिन आवश्यक नै ठानिरहेका छन् ।
सयौँ कालजयी गीतहरु दिनुभएका नेपाली आधुनिक सङ्गीतका ‘जिउँदो किंवदन्ती’ रहेका अम्बर गुरुङप्रति राज्य यसरी पूरै बेखबर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, लाजमर्दो स्थिति हो ।
नेपाली सङ्गीतका मूर्धन्य धरोहर अम्बर गुरूङको उपचारको लागि देश अनि बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले कामना सहित उपचारको लागि सहयोगको प्रयास थालनी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गानको धूनका सर्जक समेत रहेका एक अजम्बरी संगितकार अम्बर गुरुङ सरकारको आश्वासन मात्र पाएर बेडमा सहयोगको याचना गर्न बाध्य हुन थालेका छन् ।
राजनीतिक शक्ति र सत्तामा भएकै कारण सहयोग पाउने उदाहरण यहाँ प्रस्तुत खुमबहादु खड्काले पाएको उपचार सम्मानसँगै तल लेखिएको भरतराज सुवेदीको उचपार सहयोगले अझ प्रष्ट पार्छ ।
तत्कालि अर्थमन्त्री रामशरण महतका दाहिने हात रहेका सुवेदी भ्रष्टाचार काण्ड र अनियमीतताको दर्जनौ आरोपमा मुछिएका ब्यक्ति हुन् भने उनी उमेर समेत सच्याएर धेरै समय सरकारी पद खान खोज्ने लोभीपापी हुन् ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न उनलाई समेत उतिबेला सायद उनै विश्वका उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री महतले नै ५ लाख रुपैयाँ उपचारको लागि भनेर दिएका थिए ।
तत्कालिन राजा महेन्द्रले उनको संगित र स्वरको सम्मान गर्दै अम्बरलाई नेपाल बोलाएका थिए । घर समेत नभएका उनै अम्बर अहिलेसम्म छोरीको भाडााको घरमा बस्दै आएका छन् । श्रीमति प्यारालाइसिसका कारण काठमाडौँमा छिन् भने आफु मृत्यु शैया कुरे जस्तै अवस्थामा भारतमा उपचाररत छन् ।
जनस्तरबाट अम्बर बचाउ अभियान चलाएर सहयोग जुटाउन सुरु गरेपनि अम्बर पुत्री अलकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दै राज्यले बचन दिएकाले राज्यले नै पुरागर्नुपर्ने बताइरहनुभएको छ । तर नकचरो सरकार अझै बचन दिएर पनि पुरा नगरि लाज पचाएर बसिराखेको छ ।
भारत भ्रमणमा जाँदा उनले आफ्ना स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई अस्पतालमा भेट्न पठाए पनि उपचार खर्च सुको नदिएका ओली हेर्दा सबथोक दिएजस्तो देखाउन तल्लिन रहेपनि हालका मितिसम्म केही नदिइ बसिराखेका छन् । लाग्छ सरकार अम्बर गुरुङ मृत्युपछि उपचारको बिल बुझेर भर्पाइ दिन कुरिबसिराखेको छ ।
अर्थमन्त्री देखी प्रधानसेनापती समेतबाट आश्वासनको खात पाएका कालजयी श्रष्टा अम्बर गुरुङ अहिले बाँचेपनि मर्न न मर्छन् नै । तर पनि उनि मरेर गएपनि नेपाली जनमनमा सँझै अम्बर बनेर बसिराख्नेछन् । तर प्रतिनिधि पात्र सरकारका मुखिया केपी ओलिलाई मान्ने हो भनेपनि राजनीति गरिरहेका सबै नेताले बुझुन् मरेर गएपनि तिमिलाई सम्झने तिम्रा कार्यकर्ता त हुनेछन् तर आँसु चुहाएर रुने सच्चा नेपाली कोही हुने छैनन् । फगतका स्वार्थका मलामी बाहेक ।